ဆောင်းရာသီမှာ ခြောက်သွေ့နေတတ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေအတွက် - Hintharmedia
ဆောင်းရာသီမှာ တိုက်ခတ်တဲ့လေရဲ့ အအေးဓာတ်နဲ့ ခြောက်သွေ့မှုတွေကြောင့် နှုတ်ခမ်းတွေကွဲတတ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ အေးနေချိန်မှာ လက်ချောင်းလေးတွေကအစ နွေးထွေးအောင် ဂရုစိုက်တတ်ကြပေမယ့် နှုတ်ခမ်းတွေကိုတော့ အအေးဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ပေးဖို့ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေက ပါးလွှာပြီး နူးညံ့တဲ့ အရေပြားပါပဲ.. ဒါကြောင့် ပိုပြီးဂရုစိုက်ပေးဖို့တောင် လိုပါတယ်။ ဆောင်းရာသီတစ်လျှောက်မှာ နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ကွဲအက်မနေဘဲ နူးညံ့စေဖို့ ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်မလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. နှုတ်ခမ်းကို လျှာနဲ့မသပ်ပါနဲ့။
နှုတ်ခမ်းခြောက်လာတဲ့အခါ အစိုဓာတ်ရအောင် လျှာနဲ့သပ်တာမျိုးလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလို လုပ်တာက နှုတ်ခမ်းကို စိုပြေစေမှာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ တံတွေးကြောင့် နှုတ်ခမ်းပါးတွေ ပိုပြီး ခြောက်သွေ့စေပါတယ်။
၂. အဆီပါဝင်တဲ့ Lip-balm ကို အသုံးပြုပါ။
အဲ့ဒါတွေက ခြောက်သွေ့ကွဲအက်ပြီး အရေပြားလန်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို ကြာရှည်စိုပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Petroleum Jelly, essential oils တွေနဲ့ ဂရစ်စလင်းတို့ ပါဝင်ထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းအဆီတွေကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဒါတွေက နှုတ်ခမ်းရဲ့ စိုပြေမှုကို ကြာရှည်ထိန်းပေးထားနိုင်တာကြောင့် နှုတ်ခမ်းအရေပြားလန်တာတွေကို သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃. ပူရှိန်းပါတဲ့ Lip balm တွေကို ရှောင်ပါ။
ပရုတ်နဲ့ ပူရှိန်းတွေက နှုတ်ခမ်းတွေကို ခြောက်သွေ့စေပါတယ်။ ပူရှိန်းပါတဲ့ နှုတ်ခမ်းအဆီတွေကို သုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ပိုခြောက်ပြီး ကွဲအက်လာမှာပါပဲ။
၄. ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ် းပွတ်တိုက်တာတွေ မလုပ်ပါနဲ့။
နှုတ်ခမ်းအရေပြားလေးတွေ အဖတ်ဖတ်ကွာနေတဲ့အခါ ခွာပစ်တာတို့၊ brush နဲ့ ပွတ်ပစ်တာတို့တွေ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နှုတ်ခမ်းကို သွားနဲ့ကိုက်တာ၊ လက်လေးတွေနဲ့ ခြောက်နေတဲ့နေရာကို ဆွဲခွာနေတာမျိုးတွေ မလုပ်ရပါဘူး။ အဲ့လိုတွေလုပ်ရင် နှုတ်ခမ်းတွေကွဲပြီး နာကျင်လာတာပဲ ရှိမှာမို့ ရှောင်ရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အရမ်းဆိုးလာတဲ့အခါ ပါးစပ်မှာ အနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆီများများပါတဲ့ lip balm ကိုသာ နှုတ်ခမ်းလေးပေါ် ပွတ်နေတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
၅. ညမအိပ်ခင် နှုတ်ခမ်းအဆီလိမ်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
လူတော်တော်များများက ပါးစပ်ဖွင့်ပြီး အိပ်တတ်ကြပါတယ်။ ၈ နာရီလောက် ပါးစပ်နဲ့ အသက်ရှူသွင်း ရှူထုတ် လုပ်တဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းတွေလဲ ပိုပိုပြီး ခြောက်သွေ့လာမှာပါ။ ဒါကြောင့် နှုတ်ခမ်းရဲ့ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းထားပေးဖို့ ညမအိပ်ခင် နှုတ်ခမ်းအဆီ လိမ်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ယခင်ဆောင်းပါးမနီလာမြို့ပေါ် ပို့ဆောင်ရေးစနစ်သစ် လူကြိုက်များ ရေပန်းစားနေ
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားတန်ဖိုးထားခြင်း (Self-Respect) ဆိုတာဘာလဲ…